Khaniisnimada | Zanzu
Dadka qaarkood waxay u leeyihiin roomaantig iyo/ dareen galmo dadka ay isku mid yihiin xaga sinjiga. Labbadaba haweenka iyo ragaba waxay noqon karaan khaniis. Raga ay soo jiitaan raga kale waxaa loogu yeedhaa khaniis; haweenka ay soo jiitaan haweenka kale waxaa loogu yeedhaa khaniisado ama khaniisado Dadka qaar waxaa soo jiita labbadaba raga iyo haweenka. Waxaa loogu yeedhaa labba sinjiile.
Qof waxa uu noqon karaa khaniis isaga oo aan doonay inuu la sameeyo galmo ama xidhiidh qof kale oo ay isku sinji yihiin.
2 nin oo isku ahaaday
Raga qaarkood keliya waxa leeyihiin dareenka khaniisnimada muddo kooban oo noloshooda ah.
Dadku waxay dooran karaan haddii ay nafahooda ugu yeedhaan khaniis, khaniisad ama labba sinjiile. Tusaale ahaan, raga qaarkood waxay galmo la sameeyaan raga, laakiin isugu yeedhaan nafahooda khaniis.
Sababtee dadku khaniis u noqdaa?
Lama garanayo sababta qofka ay u soo jiidato hal sinji ama mid kal, ama labbada sinjiba. Si kastaba ha ahaatee, ma garanayno taas:
inaad khaniis noqotaa maaha doorasho. Waxay u timaadaa si dabiici ah.
khaniisnimadu waxay ka dhacdaa wadama oo dhan iyo dhaqamada. Gudaha Yurub, takoorka khaniisiinta waxa mamnuucay sharciga. Waxa mamnuucay sharciga in dadka loola dhaqmo si gooni ah oo la faquuqo ama la saaro xayiraada iyaga sababtoo ah khaniisnimadaa.
Ma cadda haddii khaniisnimad la kala dhaxlo. Doorka uu ciyaaro qofka korinayaa sidoo kale si dhab ah looma ogga.
U sheegida kuwa kale inaad tahay qof khaniis ah.
Rag iyo haween badan waxay dareenkooda ku hayaan gaar. Kuwa kale waxay u sheegaan qoyskooda iyo saaxiibada inay yihiin khaniis ama labba sinjiile oo waxay ugu noolaadaan khaniisnimadooda si furan.
U sheegida qof inaad tahay khaniis ama labba sinjiile inta badan ma fududa oo waxay qaadataa dhiiranaan badan. Raga iyo haweenka khaniiska ama labba sinjiilaha waxay u baahanyihiin wakhti ay ku aqbalaan inay soo jiidato dadka ay isku sinjiga yihiin.
Waxay u noqon kartaa nefis dadka kale. Waa inaadan qarin in dheeraad ah. Marka koowaad lahadal dadka aad u malaynayso inay kuu aqbali doonaan sidaas tahay. Iska jir falcelin ugu horaysa had iyo jeer ma wanaagsana.
Waa inaadan u sheegin dadka oo dhan inaad tahay khaniis. Haddii aad u malaynayso inaanay badbaado ahayn inaad u sheegto kuwa kale, ka dib waa inaadan samayn.
La kullanka khaniisiint akale, khaniisadaha ee dadka labba sinjiilaha ah.
Waxay yihiin ururo gaar ah iyo meelo lagu kulmo halka aad ku baran karto khaniisiin kale, khaniisado ee dadka labbada sinjiilaha ah.
Khaniisnimada iyo sharciga
Gudaha Yurub, takoorka sababta u ah qaabka galmo waxaa mamnuucay sharciga. Waxa mamnuucay sharciga in dadka loola dhaqmo si gooni ah oo la faquuqo ama la saaro xayiraada iyaga sababtoo ah sifooyinka gaarka ah ee sharcigu ilaaliyo. Khaniisnimada ama galmada beddelida sinjiga waxaa ilaaliya sifooyinka. Waa mamnuuc in la takooro qof iyaddoo ku salaysan, tusaale ahaan, codsiga shaqada, xaga shaqada, gudaha waxbarashadda, iyo marka la kiraysanayo guri.
Dadka isku sinjiga ah way yeelan karaan xidhiidh. Gudaha Netherlands, sidoo kale way is guursan karaan waxay samaystaan lamaananimodiwaan gashan.
2 nin oo isku guursanaya hoolka magaalada
Gudaha Netherlands, 2 rag, ama 2 haweena si wada jir ah waxay ugu noqon karaan waali ilmo. Sidoo kale way korsan karaan ilmo Korsashada ilmahu macnaheedu waxa weeye inaad noqoto waalid sharci ah ee ilmaha aanad dhalin. Uma baahnid inaad guursato si aad u korsado ilmo. Waxaad sidoo kale korsan kartaa ilmo haddii aad wada nooshihiin
Lamaanaha khaniisadaha ah waxay sidoo kale ku dhali karaan carruur dhexda daawaynta bacriminta wadata shahwada ka timid qof ku deeqa ah.
Haweenka khaniisiinta oo wata carruurtooda
Haddii aad doonayso inaad ka hadasho mowduucyada sida xidhiidhada, dareemadaada ama galmada, waxaad wici kartaa, qoraal onalyn ah kula hadli ama boosta ku soo dir addoo magacaaga qarinaya Korrelatie.
Goobta khaniisadaha, khaniisiinta, labba sinjiilayaasha iyo qofka sinjigiisa beddela. Haddii aad qabto wax su'aalo ah, waxaad ka waydiin kartaa iimayl ahaan, qoraal onlayn ahaan ah ama telefoonka.
Macluumaadka, taageerada iyo hawlaha bulshada ee LGBT dadka ah ee ku jira xarumaha magan galya doonka.
Nin ilaa nin
Websaydka raga u galmooda raga. Websaydkan waxay haysaa macluumaadka ku saabsan ka baadhida STIyada ama HIV
Basaliga ku jira Buluugu
Goobta xidhiidhka booliska ee khaniisada, khaniisinta iyo kuwa sinjigooda beddelay.
Haddii aad ka da' yar tahay 25, waxaad la xidhiidhi kartaa Sense wixii su'aalo ku saabsan ka hortagga uurka, galmadda iyo STIs. Tan waxaad ku samayn kartaa iimayl, telefoonka, wada hadal qoraal ah oo onlayn ah ama samaynta ballanka ee saacadaha la tashiga Sense.
Ururka raga khaniiska ah ee qaba HIV
Xafiisyada ku lidka ah takoorka
Haddii aad dareento in lagu takooray, waxaad uga warbixin kartaa xafiiska ku lidka ah takoorka.
Mowduuyo badan oo la xidhiidha Khaniisnimada
Waa maxay kondhomku?